Soomaaliya, 08 March 2018
Khamiis 8 March 2018
Warbixinno: Maalinta Caalamiga ah ee Haweenka
Dunida waxa sannad walba maanta oo kale (Maarso, 8) laga xusaa maalinta caalamiga ah ee haweenka.
USA: Cabashada Dhalin-yaro Soomaali ah oo Xiran
Bishii December ee sanadkii tagay ee 2017-dii, waxaa indhaha caalamka soo jiitay sheeko ku saabsaneyd 92 Somali ah oo Mareykanka laga masaafurinayay oo diyaaraddii wadday ay ku degtay dalka Senegal ka dibna dib loogu soo celiyay Mareykanka.
Madaxweyne Biixi: Hadalka Reysal Wasaare Kheyre Wuxu Ka Dhigan Yahay Dagaal
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta ka hadlay heshiiska dekedda Berbera ee shirkadda DP World, Somaliland iyo Itoobiya u dhaxeeyay, kaasi oo ay dawladda Soomaaliya ku tilmaamtay mid sharci darro ah, oo aanan waxba ka jirin.
Wanlaweyn: Masuuliyiin Qarax Lagu Dilay
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maanta qarax lagu dilay Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Cali “Baraf” oo ah wasiiru-dowlaha amniga ee maamulka Koonfur Galbeed, xildhibaan Axmed Cabdi Faarax (Kabaweyne) oo ka tirsan xildhibaannada maamulka Hir-Shabeelle.
Jowhar: Dad u Dhintay Cudurka Shuban Biyoodka
Bilihii u dambeeyay Isbitalka Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe waxaa la soo gaarsiinayay bukaanno uu soo ritay xanuunka shuban biyoodka oo qaarkoodna ay u dhinteen.
Barnaamijkan oo toddobaadkii mar baxa waxaan ku soo qaadanaa arrimaha haweenka iyo qoyska.
Tahriibayaal ka Soo Laabtay Liibiya oo Muqdisho Gaaray
Magaalada Muqdisho waxaa maanta dib ugu soo laabtay 13 qof oo ah muhaajiriin Soomaali ah oo kasoo laabtay dalka Liibiya.
Caruur ka soo Baxsatay Shabaab oo Buula-burde Gaartey
Mas’uuliyiinta magaalada Buula-burde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen laba carruur ah oo kasoo baxsaday dugsi ay ku hayeen maleeshiyada ururka al-Shabaab.
Dhageyso Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 411-aad
Dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijii Dhaqanka iyo Hiddaha, oo uu soo jeedinayo Axmed Faarax Cali (Idaajaa).
Warbixin: Doorka Haweenka ee Siyaasadda iyo Nabadda
Maalinta berrito ah waxaa adduunka laga xusayaa maalinta haweenka caalamka.
Africom: Caruur iyo Dumar kuma Dhiman Bariire
Taliyaha howlgalka ciidamada Mareykanka ee Africa ee loo soo gaabiyo Africom Gen. Thomas D. Waldhauser ayaa shalay guddiga arrimaha ciidamada ee Aqalka Wakiilada ee Mareykanka uga warbixiyay howlgallada ka dhanka ah Al-Shabab ee uu taliskiisu ka wado Soomaaliya
London: Shirka Gar-gaarka Bini'aadannimo Soomaaliya oo Furmay
Magaalada London waxa maanta ka furmay shir caalami ah oo looga hadlayo gargaarka bani'aadannimo ee Soomaaliya.